မျက်နှာပြင်အပြည့် all-screen phone ဒီဇိုင်း Teaser ဓာတ်ပုံနဲ့ Lenovo Z5 – AsiaApps
May 14, 2018 May 14, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on မျက်နှာပြင်အပြည့် all-screen phone ဒီဇိုင်း Teaser ဓာတ်ပုံနဲ့ Lenovo Z5
ခုနောက်ပိုင်း smartphones ထုတ်လုပ်သူတွေ အများစုကို လေ့လာကြည့်ရသလောက် သူ့ထက်ငါအပြိုင် screen အရွယ်အစားကို ကြီးသထက်ကြီးလာအောင် ကြိုးစားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ( ဥပမာပြောရရင် iPhoneX ရဲ့ Notch ဒီဇိုင်း)။ သူတို့တွေထဲက Lenovo Z5 ရဲ့ screen အရွယ်အစားကြီးပုံကတော့ သာမန်ထက်ပိုပါတယ်။ Notch ထက်ကိုပိုတဲ့ all-screen ဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ သူ့ကိုတွေ့ရမယ်လို့ ယူဆထားကြပါတယ်။ Lenovo Z5 ရဲ့ မျက်နှာပြင်အပြည့် ဒီဇိုင်းပုံစံ ပုံကြမ်းကို Lenovo ရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Chang Cheng ရဲ့ Weibo မှာတင်ထားတဲ့ post ထဲမှာ အပေါ်ဆုံးမှာ ပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။
မျက်နှာပြင်အပြည့် ဒီဇိုင်ပုံစံကတော့ တော်တော်လေးကို မိုက်ပါတယ်။ သူတင်ထားတဲ့ post မှာ ပါတဲ့ စာသားတွေအရ Lenovo Z5 က ကုမ္ပဏီရဲ့ flagship ဖုန်းအသစ်ဖြစ်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Lenovo Z5 ကို ထုတ်လုပ်နေပြီလား (ဒါမှမဟုတ်) ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအနေနဲ့ပဲရှိနေသေးတာလားဆိုတာကိုတော့ post မှာ သဲသဲကွဲကွဲ မဖော်ပြထားပါဘူး။ ဇဝေဇဝါ လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
မျက်နှာပြင်အပြည့်ဖုန်းဒီဇိုင်းက အရမ်းကို မိုက်တာ မှန်ပေမယ့် front ကင်မရာ၊ အခြား hardware တွေ နဲ့ sensors တွေအတွက် နေရာရှာဖို့ challenge တွေရှိနေပါသေးတယ်။ သူတို့တွေကြောင့် အခုလက်ရှိ မျက်နှာပြင် အကျယ်ဆုံးဖုန်းတွေ all-screen ဒီဇိုင်းနဲ့ မဟုတ်ဘဲ Notch ဒီဇိုင်းတွေ အနေနဲ့ပဲ တွေ့နေရတာပါ။
Lenovo က တကယ်ပဲ all-screen ဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးနိုင်မှာလား???
Z5 ရဲ့ Front ကင်မရာ ထားဖို့ နေရာ ပြဿနာကို Lenovo ဘယ်လိုကိုင်တွယ် မလဲ ဆိုတာကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။ Cheng ရဲ့ post ထဲမှာတော့ “နည်းပညာပိုင်းထိုးဖောက်မှု ၄ ခု” နဲ့ “မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာ ၁၈ ခု” ကို ဖုန်းအတွက် လုပ်ထားတယ်လို့ အခိုင်အမာဆိုပေမယ့် အသေးစိတ်တော့သေသေချာချာ မသိရသေးပါဘူး။
Lenovo Z5 ရဲ့ မတူညီတဲ့ teaser တစ်ခုကိုလည်း ဝေမျှထားတာတွေ့ရပါသေးတယ်။ Teaser အရ ဖုန်း body ရဲ့ ၉၅ရာခိုင်နှုန်းက မျက်နှာပြင် ဖြစ်မယ့်ပုံပါပဲ။ Teaser လေးကိုကြည့်ကြည့်ပါ။
ဓာတ်ပုံထဲမှာ LenovoZ5 ရဲ့ ပုံအပြည့်အစုံကိုတော့ မဖော်ပြထားပါဘူး။ တစ်ဝက်ပဲပြထားပါတယ်။ Z5 အပေါ် လူစိတ်ဝင်စားမှု တိုးလာစေချင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Asiaapps ပရိသတ်ကြီးရေ Lenovo ကတော့ ပဟေဋ္ဌိတွေ ဖွက်နေပြန်ပါပြီ။ Lenovo Z5 မှာ challenge တွေကိုကျော်ပြီး တစ်ကယ်ပဲ All-screen ဒီဇိုင်း ကို ထုတ်နိုင်မှာလား၊ မထုတ်နိုင်ဘူးလား ဆိုတာ ကိုတော့ မကြာခင်သိရမှာပါ။ အဲ့တော့ Lenovo Z5 ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးမယ့် နေ့ကို အတူတူစောင့်ကြတာပေါ့နော်။ မင်မင်ကတော့ Lenovo လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ Lenovo ရဲ့ VP Cheng ကြီးက တင်ပါ့မလားနော် ??? ဒါပေမယ့် တကယ်လုပ်နိုင်တယ်ပဲထားဦး front ကင်မရာကြီးကို ဘယ်နားကိုပို့မလဲ…။ တွေးရင်းနဲ့ ပိုပို လေးနက်လာတဲ့အတွက် မတွေးပဲ စောင့်ကြည့်တာ အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
Source: CNET Via 1, 2